Ibsa Ejjeennoo Gummi Paarlamaa Oromoo
Waamiicha ummata Oromoo maaraaf.
Yakki Dubarti ulfa Oromoo ciinsifatu Aadde Biraanee Maammoo Irrati rawwatamee nu qoofa utuu hin tane dhala nama kan ta'ee hunda kan gadisisu dha. Yakkii gara jabina akkasi kun adunya irrati mootummaadhan rawwatame hin beeku. Diini Dambi Dolloti Dubartii Oromoo kana ajeese Oromiyyaa keessa ba'uu qaba. Kun yakka yakka caaluu OPDO/EPRDF yeeroo dhumaaf saba Oromoo duguga sanyii rawwata jirtu fulla isaa xumura waan ta'eef uumani Oromoo bakka jiru ka'ee OPDO/EPRDF hunda of keessa basuun diirqama. Lammii Oromoo kan ta'ee yakka sukkanessa kana irrati kan obsuu yoo ta'ee ini iyuu dura dhabamu qaba, dhaabbileen siyyasa Oromoo biyya keessa fi biyya ala hundi OPDO waliin quunammti kami iyuu qaban dhimma kana caalisan darbani OPDO waliin hojeetan hundi yakkamtoota.
OPDON yakka wagga 28 gutuu Oromoo irrati raawwate fi rawwata jirtuf seerati dhiyyachu qabdi, yakkan samiicha, reebicha, ajeecha, buqusu, biyya arai’achuu, yakka waraana kkf yakkoota Oromoo irrati rawwateef yakkamtoon addabamu qabu. OPDOn dr. Abiyi Ajeecha waga 27 rawwatama ture nu hirnfachisu maqa waqayoon ini jalala fi tokkumma inin jeedhu soba ta'uu isaa raggan yakka Dambi Dollo caalee hin jiru.
OPDOn kan dhalateef saba Oromoof qabsa'uuf miti Qabsa'oo Oromoo takkalte kufsuuf, kayyoo TPLF qoophese hoji diinuma ABO fi Umata Oromoo irrati raawchu dha. Ama ilee saganta isaan isaa xumura ABO baleesu saba Oromoo rakko adda adda itti umadhan fixuu, lafa Oromoo kara hunda samisisu dhaabilee Oromoo garaaf bulte of jala galchu kkf rawwacha jiru. OPDO dhaloota isheeti hanga gaafa dhabamu isheeti yakka waan dalagduuf Oromoo OPDO irrati tarkanfi dhuma fudhachun of keessa basuu qaba. OPDOn fira Oromoo ta’uu hin dandeesu meesha diina tatee Oromoo fi Oromiyya baleesu waan dhalateef.
Oromoon waga 150 darbe du'ii waan itti hamateef qabsa'ee TPLF of irra darbe, jarasoolin TPLF manati galan iyuu Ijooolee TPLF bobatee Oromoo fixaa jirti.
Ajeechan Dubarti Ulfa Dammbi Dolloti irrati gegefame kun hara waan egalamee miti. Yakkaa Hararge, Borna, Gujii, Balee, Wallo, Rayyaa, Matakkal, Asossa, Wallaga irrati gegefama ture fi gegefama jiru OPDO/EPRDF hunda harka keessa qaban dha. Utuu Harka keessa hin qaban ta'ee Abdi Iliye seerati dhiyeesu waan isaan dhorke hin jiru. Ogannoota Waraana Ummatati boba'ee lammii naga ajeesu kana ilee irra dhorku hin walale.
Waan Walllga keessati raawwatama jiru keesatu Dambi Dollo keessati waan rawwatama jiru Ireal ilee Paalistiin irrati rawwatee hin beektu, Isreal Dubartii Ulfa miti dabarti iyuu rasasan hin ajeesan xiifuma utuu dubartoon Paalsitiin dhagan isaan rukutan harkan of irra dhorku male meesha dubartiti harka quulati hin hin dhukasan. Yakki OPDO /EPRDF raawwacha jirtu yakka adunya irrati hin rawwatamin dha. Qeerroon Oromoo, Abbootiin Gadaa Oromoo, beekkan Oromoo baratoon Oromoo utuu adda wal hin qoodiin diina OPDO/EPRDF dura dhabachun dirqama.
Yakka Dugugua sanyii Oromoo irrati geegefama jiru, OPDO, Basasoota fi Ogannota OPDO? EPRDF lafa Oromiyya keesa bafne malee qabsoon keenya dhabachu hin qabu. Nami haadharaaa dhalate hundi ajeecha sukkanessa Aadde Biraanee Maammoo irrati rawwatamee kana balaalefachu qaba. Qeerroon Oromoo lammiin Oromoo waan qabdun fudhate diina kara itti cufun Oromiyya siirna garbonfata jala basuu qabda.